Mmeghachi omume bonded Silicon Carbide maka oge ufodu na-eyi Parts na Setịpụ biarin The mmeghachi omume bonded Silicon Carbide anabata a dịgasị iche iche nke asịd na alkalis. Na na magburu onwe arụmọrụ nke elu ike, elu ekweghị ekwe, elu wear eguzogide, elu okpomọkụ na-eguzogide, corrosion eguzogide. The dị iche iche iche iche nke shapes nke pụrụ iche akụkụ ndị kwesịrị ekwesị maka na Ngwuputa, Petrochemical, Metallurgical n'ichepụta, aerospace na nuclear ọrụ, dị ka a kpọmkwem gburugburu ebe obibi. Anyị pụrụ ime ka ọ bụla size ...
Mmeghachi omume bonded Silicon Carbide for Irregular Wear Parts and Thrust Bearings
The Mmeghachi omume bonded Silicon Carbide anabata a dịgasị iche iche nke asịd na alkalis. Na na magburu onwe arụmọrụ nke elu ike, elu ekweghị ekwe, elu wear eguzogide, elu okpomọkụ na-eguzogide, corrosion eguzogide. The dị iche iche iche iche nke shapes nke pụrụ iche akụkụ ndị kwesịrị ekwesị maka na Ngwuputa, Petrochemical, Metallurgical n'ichepụta, aerospace na nuclear ọrụ, dị ka a kpọmkwem gburugburu ebe obibi. Anyị pụrụ ime ka ọ bụla nha nyere dị ka ndị ahịa arịrịọ.
Eyi-eguzogide, elu okpomọkụ ike na corrosion na-eguzogide ka Mmeghachi omume bonded SiC ihe ezigbo ihe n'ihi na wear mmiri, dị ka kposara, efere na impellers. Ọ nwekwara ike ga-eji na nzube biarin na ike na-ebu oké elu ibu na kpamkpam mmeru mmiri.
Silicon Carbide SiC (SiSiC / RBSiC) Akụkụ:
Abrasion / corrosion eguzogide
Magburu onwe thermal ujo e ji mara
Magburu onwe ọxịdashọn eguzogide
Good akụkụ akara nke mgbagwoju shapes
Ogologo ndụ n'etiti nnọchi / rebuilds
Ike na elu okpomọkụ ruo 1380 ° C
Previous: RBSiC (SiSiC) conical uwe
Osote: Mmeghachi omume bonded sịlịkọn carbide nyo separator
agbakọta RBSiC Fittings Ma Ọkpọkọ
RBSiC (SiSiC) Efere Mats
RBSiC (SiSiC) ogige
Rbsic (Sisic) yiri okoso uwe
RBSiC (SiSiC) Ne lining Board
Rbsic (Sisic) efere
Rbsic naa Inlet
Sic efere Impeller
Silicon abatawo Sisic
SiSiC ibé Of n'ekwú ọkụ
eyi Protection RBSiC Products
Eyi eguzogide ọgwụ RBSiC (SiSiC) iche iche
Eyi eguzogide ọgwụ RBSiC efere
eyi-eguzogide ọgwụ RBSiC akụkụ na Machinery
DN100 Gas Scrubbing nozulu
DN50-biotek RB-Sic nozulu
DN50 oghere cone Ọkara n'akuku
Mmeghachi omume-bonded Silicon carbide anọ ụzọ ọkpọkọ